La Shaqeynta Faylka .htaccess In WordPress | Martech Zone
WordPress waa madal aad ufiican oo sifiican ugafiican sida ugu faahfaahsan uguna awood badan dashboardka caadiga ah ee WordPress. Waxaad ku guuleysan kartaa wax badan, marka loo eego qaabeynta habka boggaagu u dareemayo iyo u shaqeynayo, adoo si fudud u adeegsanaya aaladda WordPress ay kuu diyaarisay adiga oo ah heer ahaan.
Waxaa jira waqti nolosha milkiilaha degel kasta, si kastaba ha noqotee, markaad u baahan doonto inaad ka gudubto shaqadan. La shaqeynta WordPress .htaccess file waxay noqon kartaa hal wado oo tan lagu sameeyo. Faylkani waa feyl muhiim ah oo bartaadu ku tiirsan tahay, waxayna inta badan ka walwalsan tahay sida ay u shaqeeyaan shabakadaada.
Faylka .htaccess waxaa loo isticmaali karaa in lagu gaaro dhowr waxyaalood oo faa'iido leh, in kastoo. Waxaan horey u soo daboolnay qaar ka mid ah, oo ay ku jiraan habraac sameynta regex waxay ku weecineysaa WordPress, iyo dulmar guud oo guud cinwaanka cinwaanka cinwaanka cinwaanka cinwaanka 'WordPress'. Labadan tilmaamoodba, waanu galnay oo aan tafatirinay faylka .htaccess, laakiin annaga oo aan sharraxaad badan ka bixin sababta faylka meesha ugu horreeya ugu jiro, iyo sida aad u adeegsan karto.
Taasi waa ujeedka maqaalkan. Marka hore, waxaan eegeynaa waxa feylka .htaccess uu ku sameeyo qaabeynta WordPress caadiga ah. Kadib, waxaan kuu sharxi doonaa sida aad u heli karto, iyo sida aad wax uga beddeli karto. Ugu dambeyntii, waxaan ku tusi doonaa sababta aad u rabto inaad taas u sameyso.
Waa Maxay Faylka .htaccess?
Aynu aasaaska ka saarno jidka marka hore. Faylka .htaccess ma ahan farsamo ahaan a Faylka WordPress. Ama, in si sax ah loo dhigo, feylka .htaccess runti waa feyl ay adeegsadaan serverka Apache webka. Tani waa nidaamka hadda la adeegsanayo aqlabiyadda bogagga WordPress iyo martigaliyayaasha. Sababtoo ah baahsanaanta Apache marka ay timaado maareynta boggaga WordPress, bog kasta oo noocan oo kale ah wuxuu leeyahay feyl .htaccess ah.
Faylka .htaccess wuxuu la wadaagayaa astaamaha qaar faylasha kale ee boggaaga WordPress u adeegsado qaabeynta. Magaca faylka waa fayl qarsoon oo wuxuu u baahan doonaa in aan la qarin si wax looga beddelo. Waxay sidoo kale ku fadhidaa galka asalka ah ee boggaaga WordPress.
Xusuusnow, feylka .htaccess wuxuu sameeyaa hal shay iyo hal shay oo kaliya: waxay go'aamisaa sida loo muujiyo permalinks ee bartaada. Taasi waa taas.
Qarsoon ka dambeeya sharaxaadan fudud waa mid aad u adag, si kastaba ha noqotee. Tani waa sababta oo ah milkiileyaal badan oo bogag ah, waxyaabo dheeri ah, iyo mawduucyo ayaa isbeddel ku sameeya habka permalinks loogu adeegsado bartaada WordPress. Mar kasta oo adiga (ama plugin ah) ay isbeddel ku sameyso habka ay u shaqeeyaan shaqooyinkaaga, isbeddeladan waxaa lagu kaydiyaa faylka .htaccess.
Raadinta Iyo Tafatirka Faylka .htaccess
In kasta oo xaqiiqda ah in feylka .htaccess loogu talagalay in lagu maareeyo waxyaabaha ku habboon goobtaada, waxaad wax ka beddeli kartaa feylka si aad u gaarto natiijooyin wax ku ool ah: kuwaas waxaa ka mid ah sameynta dib u habeyn, ama si fudud u hagaajinta amniga boggaaga adoo xaddidaya marin ka baxsan bogag gaar ah.
Qeybtaan, waxaan ku tusi doonaa sida loo sameeyo taas. Laakiin marka hore…
DIGNIIN: Tafatirka faylka .htaccess ayaa jabin kara boggaaga.
Isbeddel kasta oo lagu sameeyo feylasha aasaasiga ah ee bartaadu ku socoto waa khatar. Waa in aad had iyo jeer kaydso bartaada ka hor inta aanad wax isbeddel ah ku samayn, tijaabina adigoon saameyn ku yeelan barta tooska ah.
Xaqiiqdii, waxaa jira sabab wanaagsan oo faylka .htaccess aan loo heli karin inta badan isticmaalayaasha WordPress. WordPress wuxuu leeyahay aqlabiyad badan saamiga suuqa ee bogagga ganacsiyada yaryar, tanina waxay ka dhigan tahay in qaar badan oo ka mid ah adeegsadayaashoodu ay yihiin, ma waxaan dhihi doonnaa, ma ahan kuwa ugu farsamada badan. Tani waa sababta feylka .htaccess loogu qariyey si caadi ah - si looga fogaado adeegsadayaasha layliska ah ee khaladaadka sameynaya.
Helitaanka Iyo Tifatirka Faylka .htaccess
Iyada oo intaas oo dhan ka baxsan, aan eegno sida aad ku heli karto feylka .htaccess. Si taas loo sameeyo:
U samee xiriir shabakada adoo adeegsanaya macmiil FTP ah. Waxaa jira macaamiil badan oo FTP bilaash ah, oo weyn oo halkaa jooga, oo ay ku jiraan FileZilla. Ka aqri dukumiintiyada la bixiyay si aad ugu sameyso xiriir FTP bartaada.
Markaad sameysid xiriir FTP ah, waxaa lagu tusi doonaa dhammaan faylasha ka kooban boggaaga. U fiirso faylkan, oo waxaad arki doontaa mid loo yaqaan buugga gunta.
Gudaha galkaan, waxaad ku arki doontaa feylkaaga .htaccess. Waxay caadi ahaan ka ag dhowaaneysaa xagga sare ee liiska faylasha galkaas. Guji faylka, ka dibna riix aragtida / wax ka beddelka.
Faylka wuxuu ku furmayaa tifaftiraha qoraalka.
Waana taas. Hadda waxaa laguu oggol yahay inaad isbeddel ku sameyso faylkaaga, laakiin fiiro gaar ah u yeelatid inaadan rabin inaad taas sameyso. Waxaan ku tusi doonaa sida loo isticmaalo feylkaan qeybta xigta, laakiin kahor intaanan sameyn waa fikrad fiican inaad samee nuqul deegaanka ah feylkaaga .htaccess (adoo adeegsanaya "dialogga caadiga ah" badbaadi sida "), ku samee isbedeladaada gudaha, ka dibna faylka galiya goob la dhigay (sida aan kor ku soo sheegnay).
Isticmaalka Faylka .htaccess
Hadda waxaad diyaar u tahay inaad bilowdo adeegsiga shaqooyinka dheeraadka ah ee ay bixiso faylka .htacess. Aynu bilowno dhawr ka mid ah aasaasiga.
301 ayaa wareejiya - Wareejinta 301 waa gabal yar oo koodh ah taas oo u soo dirta booqdayaasha hal bog bog kale, waana lagama maarmaan haddii aad wareejiso boosteejo gaar ah oo ku xiran bog dibadeed. Haddii kale, waxaad isticmaali kartaa feylka .htaccess si aad ugu rogto websaydhka. Waxaad sidoo kale ka amri kartaa martida nooc HTTP duug ah oo goobta ah nooc cusub, ammaan badan, HTTPS ah. Ku dar tan feylka .htacess:
Ammaanka - Waxa kale oo jira qaabab badan oo loo adeegsado feylka .htaccess si loogu adeegsado xeelado sare oo xagga amniga ah WP. Mid ka mid ah kuwan ayaa ah xidho marin u helida faylal gaar ah si markaa isticmaaleyaasha kaliya ee haysta xaqiijinta saxda ahi ay u heli karaan faylasha asaasiga ah ee bartaada WordPress ay ku shaqeeyaan. Waad isticmaali kartaa koodhkan, oo lagu lifaaqay dhammaadka faylkaaga .htaccess, si loo xadido helitaanka dhowr faylal muhiim ah:
Wax ka beddel URL-yada - Muuqaal kale oo faa'iido leh oo faylka .htaccess ah, inkasta oo uu yahay mid aad u adag in la hirgeliyo, ayaa ah in faylka loo isticmaali karo in lagu xakameeyo habka URL-yada loo soo bandhigo marka martidaadu booqdaan bartaada. Si taas loo sameeyo, waxaad u baahan doontaa inaad hubiso inaad isticmaaleyso nooca ugu dambeeyay ee Apache. Tani waxay ka dhigaysaa URL-ka hal bog inuu u muuqdo mid ka duwan kuwii soo booqday. Tusaalahan ugu dambeeya ayaa ah - laga yaabee - in yar oo aad u adag oo adeegsadayaasha badankood ay la qabsadaan feylka .htaccess. Si kastaba ha noqotee, waxaan ku soo daray si aan kuu tuso baaxadda waxa lagu gaari karo feylka. Ku lifaaq tan feylkaaga .htaccess:
Sii wadista .htaccess
La shaqeynta feylka .htaccess waa hab fiican oo wax looga barto sida boggaaga WordPress uu ugu shaqeeyo heer aasaasi ah, iyo inuu ku siiyo aragti yar oo ah baaxadda weyn ee loogu talagalay habeynta xitaa goobta caadiga ah ee WP ay ku siiso. Markaad ku guuleysato inaad la shaqeyso feylka .htaccess adoo sameynaya isbeddelada aasaasiga ah ee aan kor ku soo sheegnay, fursado badan ayaa kuu furmaya. Mid, sidaan horay u soo sheegnayba, waa kartida dib u dhig bartaada WordPress.
Mid kale ayaa ah in badan oo ka mid ah siyaabaha lagu wanaajiyo amnigaaga WordPress ay ku lug leeyihiin ama si toos ah loogu beddelo feylka .htaccess, ama adeegsiga isla nidaamka FTP si loogu beddelo feylasha kale ee xididka. Si kale haddii loo dhigo, mar alla markii aad bilowdo inaad eegto lowska iyo boolal ka mid ah bartaada, waxaad ka heli doontaa fursado aan dhammaad lahayn oo ku habboonayn iyo hagaajin ah
Tags: 301 dib u habeynoggolaadaaninkira oo dhanFileZillaftp.htaccessfaylka htaccesshtaccess filesmatchhtaccess wax ka beddel urlhtaccess dib u qoridamniga htaccessamar diidregexWordPresskeydka wordpress
Gary Stevens waa horumariye hore. Isagu waa geel xannibo waqti-buuxa ah iyo tabaruce u shaqeeya aasaaska Ethereum iyo sidoo kale gacan-yare Github wax ku ool ah.
6 Tusaalooyin Sida Ganacsiyadu Ay Ugu Awood Lahayeen Kobcinta Xilliga Aafada